Xiaomi wuxuu sii wadaa inuu balaariyo taleefannada kala duwan ee ay ku iibinayaan Spain. Sida Laba nooc oo cusub ayaa si rasmi ah u yimid, Xiaomi Redmi 6 iyo Redmi 6A. Laba moodel oo ka tirsan dhamaadka-hoose ee astaanta Shiinaha. Iyo in isticmaaleyaashu ay awoodi doonaan inay si rasmi ah uga iibsadaan Spain. Ikhtiyaar wanaagsan oo loogu talagalay isticmaaleyaasha miisaaniyaddoodu hooseyso.
Kuwani Xiaomi Redmi 6 iyo Redmi 6A aagagga hooseeya si weyn ayaa loo ballaariyay ee sumadda Shiinaha, taas oo aan ilaa hadda si fiican looga helin Spain. Laba telefoon oo qiimo jaban, oo hadda kaliya ku jiri doona websaydhkaaga.
Kuwa xiiseynaya mid ka mid ah moodelladan waxay awoodi doonaan oo kaliya inay ka iibsadaan websaydhka magaca Shiinaha. Waxaa la sheegay in dhawaan laga bilaabi doono kanaallo kale, laakiin illaa iyo hadda wax taariikhi ah lama sheegin. Marka waa inaan sugnaa wararka ku saabsan arintan.
Waxaan helnaa dhowr nooc oo ah kuwaan Xiaomi Redmi 6 iyo Redmi 6A oo la heli karo. Si ay isticmaaleyaashu awoodi doonaan inay doortaan nooca ku habboon iyaga. Waxaa jira nooc ka mid ah noocii ugu horreeyay, halka midka 6A aan haysanno laba nooc oo kala duwan. Kuwani waa noocyada iyo qiimahooda u dhigma:
Sida aad u jeeddo, qiimaha labada moodel waa wax la heli karo. Marka iyagu waa ikhtiyaar wanaagsan oo loogu talagalay dadka isticmaala kuwaas oo raadinaya taleefan hoose oo qiimo leh iyo qeexitaanno wanaagsan. Dareenkan, labada moodelba si buuxda ayey u hoggaansamaan. Marka iyagu waa ikhtiyaar wanaagsan.
Sidaan soo sheegnay, xilligan waxaa kaliya laga heli karaa degelkooda. Dhowr usbuuc gudahood waa inay ka helaan dukaamada iyo kanaalada kale, waxaan sugeynaa ogeysiisyo dheeri ah oo ka socda shabakadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi Redmi 6 iyo Redmi 6A waxay yimaadeen Spain
Xiaomi waxay ka sarreysaa Samsung iibka Hindiya